Romance – Categories – Channel Myanmar
Familiar Wife 2018 ဒီစီးရီးလေးက ၂၀၁၈ က ထွက်တာပါ။ ကျွန်တော် စကိုင်းနက်မှာ တစ်ပိုင်းကြည့်မိပြီး အတော်ကြိုက်သွားလို့ ကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်ပေးထားတာပါ။ ရယ်လည်းရယ်ရတယ်၊ ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။ ကြည့်လို့ကြိုက်ကြမှာ သေချာပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ချားဂျိုဟုဟာ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဆိုးဝူဂျင်းနဲ့ လက်ထပ်ထားပြီး ကလေးလည်း ရနေပါပြီ။ ဆိုးဝူဂျင်းဟာ ယောကျာ်းမရခင်က အတော်ကိုချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးပါ။ ယောကျာ်းနဲ့ကလေးနဲ့ အလုပ်နဲ့ ပေါင်းလာတဲ့အခါမှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းမကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။ အိမ်မှာ အော်တယ်၊ ဆူတယ်၊ ယောကျာ်းကိုလည်း ရိုက်တယ်ပေါ့။ ဒီတော့ ချားက အတော်လေး စိတ်ပျက်ပြီး ကြောက်လာပါပြီ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီလို အချိန်မှာမှ ကျောင်းတုန်းက သူခရက်ရှ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူဌေးသမီးအချောလေးနဲ့ တွေ့ပြီး သူဌေးသမီးလေး ဟဲဝန်း က သူ့ကို ကျောင်းတုန်းက ကြိုက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလာတော့ လွတ်တဲ့ငါးပါ ကြီးပါလေရော။ ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာ ချားဂျိုဟုဟာ အာကာသဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ြ့ပီး အတိတ်ကို ...
My Husband in Law (2020) [Unicode]တိတ်တခိုးချစ်ရသူ ခင်ပွန်း' ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း 'မေဟာ ငယ်ငယ်တည်းက မေ့အမေအရင်းဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားခဲ့လို့ အမေ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဂျီရဲ့ မွေးစားသမီးအဖြစ်နဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရတယ် ၊မွေးစားအမေရဲ့ သားအရင်းဖြစ်သူ ထင်ကိုမှ သဘောကျမိခဲ့ပြီး ဘာပဲဖြစ်လာလာ အနစ်နာခံ ချစ်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် ၊ထင်ကတော့ ညီမလေးတစ်ယောက်ထက်မပိုခဲ့ပဲ အမြဲစနောက်အနိုင်ကျင့်နေခဲ့တယ်...တစ်ရက်...ထင်က အာဏာရှိ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ မိန်းမဖြစ်သူယာဒါနဲ့ သွားပတ်သတ်မိခဲ့ပြီး ဒီပတ်သတ်မှုကို ရပ်တန့်ဖို့အတွက် မေနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ ဖိအားပေးခံခဲ့ရပါတယ် ၊ဘယ်လိုမှမဖြစ်တဲ့အဆုံး ထင်က လက်ထပ်မှုဟာ အတုယောင်သာဖြစ်ကြောင်း အားလုံးပြီးရင် ကွာရှင်းဖို့ မေနဲ့ နှစ်ဦး တိုင်ပင်ပြီး အယောင်ဆောင် လက်ထပ်ခဲ့ပါတော့တယ် ။သူတို့ လက်ထပ်မှုကြား ယာဒါက ပြန်လည်နှောင့်ယှက်လာချိန်မှာတော့ ဘာတွေဖြစ်လာဦးမလဲ...ထင်ကတော့ သူ့အပေါ်အနစ်နာခံပေးတဲ့ မေကို တကယ်ချစ်လာမှာလား....ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ အချစ်ဟာသဆန်ဆန်လေးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရိုက်ကူးသွားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။အင်းလေး ပုဂံ ရွှေတိဂုံစတဲ့ နေရာတွေမှာ ရိုက်ကူးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှုခင်းအလှတွေကို ...
TMDb: 8.0/10 851 votes
Born Again (2020) [Unicode]၁၉၈၀ခုနှစ် - ဂုံဂျီချော(Jang Ki-Yong) ရဲ့ အဖေက ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူကတော့ အဖေလိုမဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူပါ ၊ဂျောင်ဟာအွန်း (Jin Se-Yun) ကတော့ စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး နှလုံးရောဂါသည်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။သူမရဲ့ ချစ်သူ ချာယောင်းဘင်း (Lee Soo-Hyuk) ကတော့ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ စုံထောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ဘုရားကျောင်းကို လာရင်း ဂုံဂျီချောတစ်ယောက် ဂျောင်ဟာအွန်းကို သဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့် ဂုံဂျီချောဟာလည်း ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ...စုံထောက် ချာယောင်းဘင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းက မပြီးဆုံးပဲ နောက်ဘဝလူဝင်စားအဖြစ်နဲ့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာပါ ၊ပထမ ဘဝမှာ သူတို့တွေ ဘယ်လိုကံကြမ္မာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရမှာလဲ...လူပြန်ဝင်စားတဲ့ နောက်ဘဝမှာကော သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ Born Again ဆိုတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ဆက်လက်အားပေးကြပါနော်...( အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူတွေကတော့ Hay Thar Oo & Htet ဖြစ်ပါတယ် ) [Zawgyi]၁၉၈၀ခုႏွစ္ - ဂုံဂ်ီေခ်ာ(Jang ...
TMDb: 8.0/10 22,064 votes
Welcome (2020) [Unicode]Welcome drama လေးကတော့ fantasy romantic comedy drama အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ webtoon ကိုအခြေခံပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ၊ခေါင်းဆောင်မင်းသား Hong-Zo (Kim Myung Soo) ကိုအားလုံးသိထားကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ... Angle last's mission ထဲက ပါးချိုင့်လေးနဲ့နတ်သားလေးကို ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ လူသားအသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင်အဖြစ်နဲ့ မြင်ရတော့မှာပါ ၊ သူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့ သူရဲ့သခင် Sol Ah ရဲ့တစ်နေ့တာပူပန်မှုတွေကိုနားထောင်ပေးပြီး ဒဏ်ရာတွေကုစားပေးရမှာပါ ။မင်းသမီးလေးကတော့ 'He is Psychometric' ဇာတ်ကားနဲ့ လူသိများလာတဲ့ နှာခေါင်းမည့်လေးနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှတဲ့မင်းသမီးလေး Sol Ah တစ်ဖြစ်လဲ Shin Ye Eun ပဲဖြစ်ပါတယ် ၊ သူမကတော့ web-based comic author ဖြစ်ချင်နေတဲ့သူတစ်ယောင်ပါ ၊ ကြောင်လေးတွေကိုအရမ်းချစ်တတ်တဲ့သူပေါ့ ...Sol Ah ရဲ့ဘဝအပြောင်းအလဲကတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကို အိမ်ကိုခေါ်လာမိရာကနေစတင်ပါတော့တယ် ၊ အဲ့ကြောင်လေးကတော့ သာမန်ကြောင်လေးတစ်ကောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ လူသားအသွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်လည်းဖြစ်ပါတယ် ...
TMDb: 9.0/10 votes
Memories of the Alhambra (2018) [COMPLETE] Memories of the Alhambra (2018)ဇာတ်လမ်းတွဲMemories of Alhambra ဟာ AR (Augmented Reality) game အမျိုးအစားကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး အဓိက ရိုက်ကူးထားပါတယ်...Korea မှာ ပထမဦးဆုံး သုံးထားတဲ့ Suspense Thriller Romance Series ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး..."Jin woo ဆိုတဲ့ Game တီထွင်တဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ယောက်ရှိတယ်.. ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်...တစ်နေ့တော့ အမည်မသိ တစ်ယောက်မှသူ့ကိုဖုန်းခေါ်လာတယ်...ဂိမ်းတစ်ခုဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းရယ်..သူဖန်တီးထားတဲ့ဂိမ်းကို ဒုစရိုက်သမားများကဝယ်ဖို့ တွန်းအားပေးခံနေရတဲ့အကြောင်းရယ်ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်နဲ့ Mail တစ်ခုလည်းပို့ထားပြီး သူဂိမ်းအခြေတည်ရာနေရာကိုပြောပြီးဖုန်းချသွားတယ်..Jin woo လည်း Mail ဖွင့်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဒီဂိမ်းကိုစိတ်ဝင်စားလွန်းတော့ ချက်ချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုသူပြောတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတယ်...အဲ့ဒီမှာအံအားသင့်စရာကောင်းလောက်တဲ့ ဂိမ်းပုံစံနဲ့ တခြားမသာမာသူတွေပတ်သက်နေမှန်း Jin Woo တစ်ယောက်သိလိုက်ရချိန်မှာတော့....ဒီကားက Korea, Spain, Hungary နဲ့ Slovenia မှာ ရိုက်ကူးထားလေတော့ မြင်ကွင်းစုံ ရှုခင်းစုံနဲ့ခံစားရမယ့် အပြင်ကွီးယားကားသိပ်သဘောမကျတဲ့ ဂိမ်မာ ယောင်္ကျားလေးတွေတောင်ကြည့်သင့်တယ်လို့ညွှန်းဆိုပါရစေ...(ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားသူများကတော့ CM Family မှ ...
The Writers Project: Lhong Fai (2017) [Unicode]?မီးကိုတိုးတဲ့ပိုးဖလံ?"ကန့်ကျောက်(Baifern)"ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက် နာမည်နှစ်ခု(ဘဝနှစ်ခု)နဲ့နေထိုင်တဲ့ "ကန့်"တစ်ဖြစ်လဲ"ကျောက်""ကန့်"ဆိုတာဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေ အဒေါ်နဲ့နေရရင်း modelအလုပ်စကားပြန်အလုပ် အလုပ်ပေါင်းစုံနဲ့ ကိုယ့်ကျောင်းစရိတ်အတွက်ရှာဖွေရင်းရုန်းကန်နေရတဲ့သူ... "ကန့်"ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုကွယ်ဝှက်ရင်း ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီး သက်တောင့်သက်သာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့ မကောင်းမှန်းသိတဲ့ဘဝတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီးလျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ "ကျောက်""ကန့်ကျောက်"ရဲ့ဘဝအစစ်အမှန်ကိုသိတဲ့သူက အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း "ချွန်(Toy)" နဲ့ "ချာလာ(Linn)" ဆင်းရဲပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေရင်း ရသလောက်နဲ့ကျေနပ်တဲ့သူ"ချုန်(March)"ဆိုတဲ့သူဌေးသားပလေးဘွိုင်းလေးက "ကန့်"နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတားဆီးနေတဲ့အမေရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ထိ ကန့်ရဲ့အလှအပဆွဲဆောင်မှုတွေအောက် ရုန်းမထွက်နိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်..."ကန့်ကျောက်"မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့လူချမ်းသာဘဝမျိုးရရှိနိုင်မှာလား ? ကံအကြောင်းတရားမလှခဲ့လို့ မီးမှန်းသိနေရက်တိုးဝင်ခဲ့ရတဲ့သူမအတွက် ကံတရားဟာသူ့မဘက်ကတဖန်ရှိလာနိုင်ပါဦးမလား?မီးကိုတိုးတဲ့ပိုးဖလံလေးဘာတွေကြုံတွေ့ရဦးမလဲဆိုတာတော့ (၂၇)ပိုင်းရှိမယ့်ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ကြည့်ရှုပြီးခံစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ...( အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူတွေကတော့ Kyi Nue Zin နဲ့ Nang Mwe Kham ဖြစ်ပါတယ် )[Zawgyi]?မီးကိုတိုးတဲ့ပိုးဖလံ?"ကန႔္ေက်ာက္(Baifern)"ဆိုတဲ့မိန္းကေလးတေယာက္ နာမည္ႏွစ္ခု(ဘဝႏွစ္ခု)နဲ႔ေနထိုင္တဲ့ "ကန႔္"တစ္ျဖစ္လဲ"ေက်ာက္"​"ကန႔္"ဆိုတာဆင္းရဲတဲ့ဘဝကေန အေဒၚနဲ႔ေနရရင္း modelအလုပ္စကားျပန္အလုပ္ အလုပ္ေပါင္းစုံနဲ႔ ကိုယ့္ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ရွာေဖြရင္း႐ုန္းကန္ေနရတဲ့သူ... "ကန႔္"ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈေတြကိုကြယ္ဝွက္ရင္း ဆင္းရဲဒုကၡေတြကလြတ္ေျမာက္ၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ဘဝတစ္ခုကိုပိုင္ဆိုင္ရဖို႔ မေကာင္းမွန္းသိတဲ့ဘဝတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ "ေက်ာက္""ကန႔္ေက်ာက္"ရဲ႕ဘဝအစစ္အမွန္ကိုသိတဲ့သူက အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္း "ခြၽန္(Toy)" နဲ႔ "ခ်ာလာ(Linn)" ဆင္းရဲေပမယ့္႐ိုး႐ိုးသားသားရွာေဖြရင္း ရသေလာက္နဲ႔ေက်နပ္တဲ့သူ"ခ်ဳန္(March)"ဆိုတဲ့သူေဌးသားပေလးဘြိဳင္းေလးက "ကန႔္"နဲ႔ေတြ႕ခဲ့ၿပီးတားဆီးေနတဲ့အေမရဲ႕​ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြရပ္ဆိုင္းလိုက္တဲ့ထိ ကန႔္ရဲ႕အလွအပဆြဲေဆာင္မႈေတြေအာက္ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ပဲျဖစ္ခဲ့တဲ့ေနာက္..."ကန႔္ေက်ာက္"ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့လူခ်မ္းသာဘဝမ်ိဳးရရွိႏိုင္မွာလား ? ကံအေၾကာင္းတရားမလွခဲ့လို႔ မီးမွန္းသိေနရက္တိုးဝင္ခဲ့ရတဲ့သူမအတြက္ ကံတရားဟာသူ႔မဘက္ကတဖန္ရွိလာႏိုင္ပါဦးမလား?မီးကိုတိုးတဲ့ပိုးဖလံေလးဘာေတြႀကဳံေတြ႕ရဦးမလဲဆိုတာေတာ့ (၂၇)ပိုင္းရွိမယ့္ဒီဇာတ္လမ္းတြဲေလးကို ၾကည့္ရႈၿပီးခံစားၾကည့္လိုက္ရေအာင္ပါ...( အညႊန္းနဲ႔ဘာသာျပန္သူေတြကေတာ့ Kyi Nue Zin နဲ႔ Nang Mwe ...
TMDb: 8.3/10 8.3 votes
The Writers Project: Lhong Fai (2017)
When the Weather is Fine (2020) When the Weather is Fine (2020)ဇာတ္လမ္းတြဲအညြွန္း*****************************************************အပိုင်း(၁ မှ ၁၆)ထိ စ/ဆုံး(Unicode)ဟယ်ဝန်း (Park Min Young) ဟာစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်...သူမဟာ ဂီတပိုင်းမှာ ပါရမီပါပေမယ့် ကလေးဘဝတုန်းက အခက်အခဲမျိုးစုံကြောင့် သူကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆယ်လိုတီးခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်.. နောက်ပိုင်း ဆိုးလ်မြို့ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ သူမရဲ့မွေးရပ်မြေကိုပြန်လာဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်...... အွန်ဆော့ (Seo Kang Joon) ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ဘွတ်ဟွန်းရွာမှာ 'ကောင်းသောညချမ်းလေး စာအုပ်ဆိုင်' ဆိုတဲ့စာအုပ်ဆိုင်အသေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်..... စာအုပ်ဖတ်ရင်း ဘလော့ဂ်လုပ်ရင်းနဲ့အချိန်တွေကို ရိုးရှင်းစွာ ကုန်ဆုံးစေတဲ့သူပေါ့... တစ်နေ့မှာတော့ အရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင် လောကဒဏ်တွေခံနေရပုံပေါ်တဲ့ ဟယ်ဝန်းနဲ့ရွာမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်.....အဲ့ဒီနောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး......ဒီစီးရီးက အပတ်စဥ် တနင်္လာနဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြီး ၁၆ ပိုင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်......ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသား Kang-Joon Seo က Are You Human Too? နဲ့ Splendid Politics စတဲ့စီးရီးနဲ့မြန်မာပရိတ်သတ်များရင်းနှီးခဲ့ပြီးမင်းသမီးချော Min-Young Park ကိုတော့ ထွေထွေထူးထူးမိတ်ဆက်စရာမလိုဘူးထင်ပါရဲ....What's ...
Itaewon Class (2020)[စ/ဆုံး] Itaewon Class (2020)ဇာတ္လမ္းတြဲ[စ/ဆုံး]****************************************(Unicode)ဘဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြတ်သန်းချင်သူတွေက အသက်တိုရတယ်ဆိုတာသိပါသလားကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာကိုလုပ်ဖို့အတွက် ဘာကိုမှမကြောက်တတ်တဲ့သားအဖနှစ်ယောက်ဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းဖို့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါဘူး အဖေတစ်ခုသားတစ်ခုဘဝမှာ အဖေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ လူမှန်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝက ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲ သူရည်မှန်းထားတာတွေကိုဆက်လုပ်နိုင်ပါ့မလားငွေများတရားနိုင်ဆိုတာက ခေတ်အဆက်ဆက်ကိုရှိခဲ့တာပါခေါင်းမာတတ်တဲ့လူငယ်လေးရဲ့အချစ်ရေးကလဲ လှပနေပါ့မလားဒီကားထဲမှာတော့ အတွင်းရေးမှုးကင်မ်ကားနဲ့နံမည်မတရားကြီးခဲ့တဲ့ ပတ်ဆိုးဂျွန်က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ပါတယ်တခြားသာ မင်းသားချောချောလေးများနဲ့ မင်းသမီး၂လက်ထဲထပ်ပါသေးပါတယ် ဒီကားကို JTBC and Netflix ပေါင်းရိုက်တာပါကိုးရီးယားမှာ အပတ်စဉ် သောကြာနဲ့စနေည ၈နာရီမှာပြတာမို့ စီအမ်ကနေတော့ စနေမနက်နဲ့တနင်္ဂနွေမနက်တွေမှာစောင့်ကြည့်နိုင်အောင်တင်ပေးသွားမှာပါအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ သဉ္ဇာထက်ဖြစ်ပါတယ်(Zawgyi)ဘဝကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ျဖတ္သန္းခ်င္သူေတြက အသက္တိုရတယ္ဆိုတာသိပါသလားကိုယ္မွန္တယ္ထင္ရာကိုလုပ္ဖို႔အတြက္ ဘာကိုမွမေၾကာက္တတ္တဲ့သားအဖႏွစ္ေယာက္ဟာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ဘဝကိုျဖတ္သန္းဖို႔အခြင့္အေရးမရွိခဲ့ပါဘူး အေဖတစ္ခုသားတစ္ခုဘဝမွာ အေဖကိုဆုံးရႈံးလိုက္ရတဲ့ လူမွန္ေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝက ဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္ႏိုင္မလဲ သူရည္မွန္းထားတာေတြကိုဆက္လုပ္ႏိုင္ပါ့မလားေငြမ်ားတရားႏိုင္ဆိုတာက ေခတ္အဆက္ဆက္ကိုရွိခဲ့တာပါေခါင္းမာတတ္တဲ့လူငယ္ေလးရဲ႕အခ်စ္ေရးကလဲ လွပေနပါ့မလားဒီကားထဲမွာေတာ့ အတြင္းေရးမႈးကင္မ္ကားနဲ႔နံမည္မတရားႀကီးခဲ့တဲ့ ပတ္ဆိုးဂြၽန္က ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ပါတယ္တျခားသာ မင္းသားေခ်ာေခ်ာေလးမ်ားနဲ႔ မင္းသမီး၂လက္ထဲထပ္ပါေသးပါတယ္ ဒီကားကို JTBC and Netflix ေပါင္း႐ိုက္တာပါကိုးရီးယားမွာ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာနဲ႔စေနည ၈နာရီမွာျပတာမို႔ စီအမ္ကေနေတာ့ ...
Itaewon Class (2020)[စ/ဆုံး]
Love Bipolar (2018) Love Bipolar (2018)[ Unicode ]CM fan တွေအတွက် ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Love Bipolar ဆိုတဲ့ ထိုင်းကားလေးဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒီဇာတ်ကားလေးက 2018 မှာ ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းအပိုင်း လေးပိုင်း ပါဝင်ပါတယ် ။ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကိုယ်တွေရဲ့ အချစ်တော်မမ Poly ကတော့ နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်ယောက် Wenny အဖြစ် အဓိက ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်...Wenny က နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ဆတ်ပြီး ဒေါသကြီးလို့ ရိုက်ကွင်းမှာ အမြဲလိုလို ပြဿနာတက်ရပါတယ် ၊ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလည်းဖြစ် Wennyရဲ့ make-up artist ဖြစ်တဲ့ Sang Tai ကလည်း Wenny နဲ့အတူတူပါပဲဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ Sang Tai က ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့် လက်ကျိုးသွားခဲ့ပြီး လက်ကျိုးလို့အလုပ်နားရတဲ့အခါ Sang Tai တစ်ယောက် အကြွေးဆပ်ဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ၊အဲ့ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ...
Love with Flaws (2019) CM fan တွေအတွက် အခု တင်ဆက်ပေးမယ့် series လေးကတော့ love with flaws ဆိုတဲ့ series လေးဖြစ်ပါတယ်...ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ဂျူဆောယွန်း(Oh Yeon Seo) ကတော့ ရုပ်ချောတဲ အစ်ကို ၂ ယောက်နဲ့ မောင်တစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အစ်ကိုတွေနဲ့ မောင်ရဲ့ ပွေရှုပ်မှုကြားမှာ အမြဲကြားညှပ်ပါရသူပါသူ့အစ်ကိုတွေနဲ့ မောင်ဖြစ်သူကြောင့် အသည်းကွဲသွားကြတဲ့လူတွကို အမြဲမြင်နေရတဲ့အခါ ရုပ်ချောတဲ့ ကောင်လေးတွေက မကောင်းဘူးလို့ သတ်မှတ်ပြီး ရုပ်ချောတဲ့ ယောက်ျားတွေကို ရှောင်နေခဲ့ပါတယ်လီဂန်ဝူ(Ahn Jae-Hyeon) ကတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အကြာကြီး သွားနေပြီးမှ ကိုရီးယားကို ပြန်လာခဲ့တဲ့သူပါသူအလယ်တန်းတက်တုန်းက အီးထွက်တာကို ကျောင်းသားတွေကအီးပေလို့ နာမည်ပြောင်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လို ဝိုင်းအခေါ်ခံရတဲ့ လီဂန်ဝူကတော့ သူ့ကို အီးပေဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်ကိုခေါ်တိုင်း တကယ်ဗိုက်နာပြီး အီးပါချင်တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ trauma ကို ကုသဖို့အတွက် trauma စ ...
TMDb: 9.0/10 9.0 votes
You Season2[COMPLETE] (Unicode)Season 1မှာ ဂျိုးဟာ အချစ်အတွက်နဲ့ အဆိုးရွားဆုံးဆိုတာတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီSeason2မှာတော့ ဂျိုးတစ်ယောက် လော့စ်အန်ဂျလီကို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီး ဘဝသစ်စဖို့ကြိုးစားရင်း အချစ်သစ်နဲ့ တွေ့မှာပါ"အချစ်အတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ် ဒီလိုလုပ်တာလည်း မှန်ကန်တယ်"ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ခံယူချက်အတိုင်း လွန်လွန်ကျူးကျူးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့ ဂျိုးတစ်ယောက်ဒီလုပ်ရက်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ရှောင်ပြေးဖို့အတွက် LAကို ရောက်လာပါတယ်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထပ်မချစ်မိတော့အောင် သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းချုပ်ရင်း ဘဝသစ်စဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်ဒါပေမယ့်လည်း မှန်းထားသလိုတွေ ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာတော့....ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ Season 1တုန်းကလိုပဲ စိတ်ဝင်တစား သဲထိတ်ရင်ဖိုနဲ့ ဆက်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်Season 2ဟာ စာအုပ်တွဲထဲက Hidden Bodiesဆိုတဲ့ အပိုင်းကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဂျိုးရဲ့ ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုလည်း ပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါတယ်Castတွေ အနေနဲ့ကတော့ ဂျိုး အဖြစ်Penn Badgleyက ပြန်လည်ပါဝင်ထားပြီး ရည်းစားဟောင်း ...
You Season2[COMPLETE]
One Night Steal (2019) One Night Steal (2019) =================Nov 24 မွာစတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ ကားျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ ညတိုင္း ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။မင္းသားေခ်ာ Krist Perawat Sangpotirat နဲ႔ မင္းသမီး Punpun Sutatta Udomsilpတို႔က ေနာ့(တ္) နဲ႔ ဂ်ီ အျဖစ္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ဇာတ္လမ္း အက်ဥ္းကေတာ့... ဂ်ီဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးက ေမြးကတည္းက ကံေကာင္းတယ္...ထီေပါက္ ကံစမ္းမဲေပါက္ ေနာက္ဆုံး ေပါင္မုန႔္လြတ္က်ေတာင္ ယိုသုတ္တဲ့ဘက္နဲ႔မက်ပါဘူး ။ေနာ့(တ္)ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးကက် ဂ်ီနဲ႔ေျပာင္းျပန္ ဘာလုပ္လုပ္ ကံဆိုးတယ္... ဂီတအဖြဲ႕ေထာင္တာလည္း လုံးဝမေပါက္ျဖစ္ေနတယ္ ။တညမွာ ဂ်ီနဲ႔ ေနာ့(တ္) တို႔ ပါတီတခုမွာ ေတြ႕ၿပီး ကံတရားခ်င္း ဖလွယ္သြားခဲ့တယ္ ။အဲ့ဒီေနာက္ ေနာ့တ္ ဘာလုပ္လုပ္ကံေကာင္းၿပီး ဂ်ီဘာလုပ္လုပ္ ကံဆိုးလာခ်ိန္မွာ ကံေကာင္းမႈေတြ ျပန္ရဖို႔ ဂ်ီ ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္ ။ဂ်ီလိုခ်င္တဲ့ကံေကာင္းမႈေတြ ျပန္ရမလားေနာ့တ္ကပဲ ျပန္မေပးရေအာင္ ...
TMDb: 7.5/10 7.5 votes
Game Sanaeha (2018) Game of Love (2018) ----------------------------မင္းသားေခ်ာ James Jirayu နဲ႔ မင္းသမီးေခ်ာ Nathaphon Temirak တို႔ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဒီဇာတ္လမ္းေလးကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကည့္ဖူးၾကမွာပါ မၾကည့္ရေသးတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ အျမည္းေလးေျပာျပခ်င္ပါတယ္...ခ်မ္းသာတဲ့ မိဘကေနေပါက္ဖြားလာၿပီး “ငါက ငါပိုင္တဲ့အရာဆို ဘယ္သူ႔လက္ထဲမွ အလြယ္တကူ အပါမခံဘူး” ဆိုတဲ့ မြန္ခ်ေနာ့ (ေနာ့)...သူမဟာ မိဘႏွစ္ပါးကို အရမ္းခ်စ္ၿပီး ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္းေလးေကာင္းေပမယ့္ မာနကေတာ့ အင္မတန္ႀကီးတယ္ ။အေဖဆိုတာမသိ အေမကလည္းမလိုခ်င္လို႔ဆိုၿပီး စြန္႔ပစ္ထားတာခံခဲ့ရတဲ့ လပ္ခါႏိုင္း (ႏိုင္း)...သူကေနာ့ရဲ႕အေမက ေစာင့္ေရွာက္ထားေပးလို႔ လူလားေျမာက္ ပညာတတ္ေလးျဖစ္ခဲ့ၿပီး စြမ္းေဆာင္မႈနဲ႔အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားလို႔ ေနာ့အေဖရဲ႕ကုမၸဏီမွာ ဒုဥကၠဌရာထူးအထိ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ေက်ာင္းၿပီးလို႔ျပန္လာခါစျဖစ္တဲ့ေနာ့ဟာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈကိုသိရလို႔ အရမ္း shock ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္ အရမ္းခ်စ္ရတဲ့အေဖဟာ သူနဲ႔အသက္အရြယ္တူတဲ့ ပီမြန္ခယ္ ဆိုတဲ့ အလွမယ္နဲ႔ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ဆိုတာပါသိလိုက္ရေတာ့...ဝန္တိုမႈေတြ ေဒါသေတြနဲ႔ ခံျပင္းမႈေတြနဲ႔အတူ ရင္ၾကားေစ့ဖို႔ႀကိဳးစားရာက အေမကိုဥာဏ္ဆင္ၿပီးအိမ္အရျပန္ေခၚရင္း ႏိုင္းတစ္ေယာက္ပါ ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္နဲ႔ပါလာေတာ့ ...
The Sand Princess (2019) The Sand Princess (2019) ================” သဲမင္းသမီးေလး “သူမနာမည္က ဂုတ္ ( ဂုတ္ခ်နီဖာ ) ဂုတ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္က ၾကာပန္းေလးေပါ့…ဒါေပမယ့္ သူမဘဝက ေနကိုမျမင္ရတဲ့ရႊံ႕ႏြံေတြဖံုးေနတဲ့ ၾကာပန္းေလးလိုပါပဲမိဘအရင္းေတြဘယ္သူမွန္းမသိတဲ့ မိဘမဲ့အျဖစ္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ငယ္ငယ္တည္းက စာနဲ႔အလုပ္တူတူတြဲလုပ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အားကိုးခဲ့ရတယ္ ၊တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဂ်ီရာဖတ္ဆိုတဲ့သူေဌးသားေလးနဲ႔ေတြ႔ခဲ့တယ္ေနေရာင္ကိုေတြ႔လိုက္ရတဲ့ေသခါနီးၾကာပန္းေလးလို သူမေပ်ာ္ခဲ့တာေပါ့…ဒါေပမယ့္ အမွားႀကီးမွားခဲ့တာတယ္ ဂ်ီရာဖတ္က ငေပြင႐ူပ္ လူေဘာ္ေက်ာ့ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ဂုတ္က သူ႔ပိုက္ဆံယူတဲ့ခိုင္းဖက္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္…တစ္ရက္မွာ ဂုတ္က ဂ်ီ႕မိန္းကေလးကိစၥတခုမွာ မေမ်ွာ္လင့္ပဲ ဝင္ပါခဲ့မိတယ္အဲ့ဒီအရာကပဲ သူမဘဝကိုအေျပာင္းလဲႀကီးေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့တယ္ဂ်ီ႕က သူ႔ရည္းစားကေမြးတဲ့ သူ႔သမီးကို ဂုတ္သမီးအျဖစ္ေမြးေပးဖို႔ ပိုက္ဆံေပးငွါးခဲ့တယ္ သူကက် ေမာ္ဒယ္ေခ်ာေလးအက္ဖ္နဲ႔ယူေတာ့မွာေပါ့ ၊ဒီလိုနဲ႔ ဂုတ္က ဂ်ီ႕ကေလးေလးကို ထိန္းခဲ့ရင္း ခီရာကြမ္လို႔ေခၚတဲ့လူေခ်ာေလးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္ ၊မထင္မွတ္ထားပဲ ခီရာကြမ္က ဂ်ီရာဖတ္ အကိုျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ အက္ဖ္ရည္းစားေဟာင္းပါျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာေတာ့...သူ႔ညီ ေ႐ွ႕ေရးမပ်က္စီးဖို႔ ဂုတ္ကို သူနဲ႔လက္ထပ္ဖို႔ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာက ဂ်ီ ဂုတ္ ခီ သူတို႔ေတြရဲ႕ သံုးပြင့္ဆိုင္ဇာတ္လမ္းေလးစတင္ခဲ့ေတာ့တယ္…။( အညႊန္းေရးသားျပီး ဘာသာျပန္ေပးထားၾကတာကေတာ့ Kyi Nue Zin ...
TMDb: 8.3/10 999 votes
Strangers From Hell (2019) (Unicode) ဆိုးလ်မြို့ပေါ်မှာလို့တောင်မထင်ရလောက်အောင် စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့အဆောင်တစ်ခုဘာမှန်းမသိရပဲ အရမ်းစပ်စုတဲ့ အဆောင်ပိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီး တွေ့လိုက်တိုင်း porn တွေကြည့်နေတဲ့ နှာဘူးတစ်ယောက်ကြပ်မပြည့်မတ်မပြည့်ညီအစ်ကို၂ယောက် ရုပ်ကလေးချောချောလေးနဲ့ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်မှန်းမသိ အိတ်တစ်လုံးနဲ့လျှောက်သွားနေတဲ့လူတစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးအရှုတ်ထုတ်တွေကြားထဲကိုရောက်သွားတဲ့ မွဲတေနေတဲ့ အလုပ်သစ်ရကာစကောင်လေးတစ်ယောက် အဲ့ရပ်ကွက်ကကြောင်တွေ၁၃ကောင်ဆက်တိုက်သေတယ်ကြောင်သေမှုကိုစုံစမ်းချင်နေတဲ့ရဲမေလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ပရဟိတတွေလုပ်ပြီးချောမောတဲ့သွားဆရာဝန်တစ်ယောက်လဲပါတယ်အဲ့ရပ်ကွက်မှာ လူပျောက်မှုတွေလဲမကြာမကြာဖြစ်တတ်တယ် ဒီကားကဘယ်လိုကားမျိုးလဲparasite ကိုကြည့်ပြီးပြီလား အဲ့ကားကိုကြည့်တုန်းမှာ ခံစားရတဲ့ခံစားမှုကိုမှတ်မိသေးလားမွန်းကြပ်မှု အားမလိုအားမရဖြစ်မှု ကြောက်လန့်မှု စိတ်လှုပ်ရှားမှု အဲ့လိုတွေခံစားခဲ့ရတယ်မို့လားဒီကားက အဲ့လိုခံစားမှုမျိုးကို အပိုင်း ၁၀ပိုင်းနဲ့ခံစားရမှာပဲ မယုံမရှိနဲ့ တစ်ပိုင်းကြည့်ပြီးရင် နောက်အပိုင်းတွေကိုမကြည့်ပဲမနေနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအပိုင်းကတော့ ကိုယ်တွေအရမ်းချစ်ရတဲ့ ဂေါ်ဘလင်ကားထဲက သေမင်းဦးဦးကို ဘယ်ကားထဲမှာမှမတွေ့ဖူးသေးတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့တွေ့ရမှာပဲပြီးတော့ သူကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပါလာတာရောဟုတ်ရဲ့လားနံမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်ကို ဇာတ်ပို့လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ လူသိပ်မသိတဲ့ နာမည်သိပ်မရသေးတဲ့ သူကို ဇာတ်ဆောင်တင်ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကြီးက ကြမ်းထော်နေတဲ့ကားမို့ပြီးတော့ OCN ကရိုက်တဲ့ကားမို့ ကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘာမှမရရင်တောင်မှ နောင်တတော့ရမှာပါ ကြည့်ပြီးရင် စိတ်ထဲကမထုတ်နိုင်တော့လို့ ငါလာလို့ကြည့်မိတာလဲဆိုပြီးတော့တစ်ပတ်၂ပိုင်းလာမယ် စနေတနင်္ဂနွေ ညတွေလာမှာပါဘာသာပြန်ပြီးတော့ တနင်္ဂနွေ တနင်္လာမနက်တွေမှာတင်ပေးမှာပါ(ဘာသာပြန်ပေးထားသူတွေကတော့ Felix ပါ) (Zawgyi) ဆိုးလ္ျမိဳ႕ေပၚမွာလို႕ေတာင္မထင္ရေလာက္ေအာင္ စုတ္ျပတ္သတ္ေနတဲ့အေဆာင္တစ္ခုဘာမွန္းမသိရပဲ အရမ္းစပ္စုတဲ့ အေဆာင္ပိုင္ရွင္အေဒၚၾကီး ေတြ႕လိုက္တိုင္း porn ...
My First First Love (2019) Season (1 & 2) My First First Love / Because it's My First Love ( Season 1 and2)=====================================April 18 ရက္ေန႔က Netflix မွာစတင္ ထုတ္လႊင့္သြားတဲ့ TV series "My First First Love" မွာ Season (1 , 2) စုစုေပါင္း အပိုင္း ၁၆ ပိုင္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ႏွစ္ဆယ္အရြယ္လူငယ္ ငါးဦးက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပႆနာကိုယ္စီေၾကာင့္ တစ္အိမ္ထဲမွာစုၿပီး ေနျဖစ္သြားၾကတယ္။ ယြန္းထယ္အို နဲ႔ ဟန္ဆုန္းအီ က မူလတန္းထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြပါ။ ေဆာဒိုဟြၽန္းကေတာ့ ယြန္းထယ္အိုရဲ႕ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအတူတက္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေပါ့။ ဟန္ဆုန္းအီ နဲ႔ ေဆာဒိုဟြၽန္းက တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ႀကိဳက္သြားၾကတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲ ??? ဒီဇာတ္ကားေလးဟာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ...
My First First Love (2019) Season (1 & 2)